Infojobs inovandudzwa uye inogamuchira hukuru hwekugadzirisa | IPhone nhau
Kugadziridza kunyorera kwakakosha padanho rekuita, asi inoda shanduko nekufamba kwenguva. Vagadziri veInfojobs vanoziva izvi, ndosaka vakagadzirisa uye vakarerutsa kutarisisa kwekushandisa kwavo. Ivo vaida kuenda kure kupfuura logo, uye iyo sisitimu sisitimu yakagadziriswa zvachose nechinangwa chekuvandudza nzira iyo vashandisi vayo vanotsvaga basa uye vazive nezvevashandi chikamu. Isu tinokuudza kuti ndedzipi nhau dzechishandiso chitsva icho Infojobs chakaburitsa muIOS App Store uye izvo zvinokubatsira iwe kuwana basa.
Iyo app yaive yakanamatira mune yakasarudzika dhizaini kwenguva yakati, kunyangwe yaive yakanaka zvine musoro ichienzaniswa neIOS. Pane rimwe divi, ko kana vakawedzera kubva pakutanga mabasa, asi nekuwedzera mashandiro uye vasingachinje dhizaini ivo vakonzera kuzadza munzira yatino famba nayo, iyi ndiyo nzira Infojobs inotsanangudza nhau mukushandisa kwavo:
Chinangwa chedu ndechekukupa iwe yakanakisa yekutsvaga basa chishandiso. Kwenguva yakati takapedza simba rakawanda mukushandisa mashandiro matsva, asi tichiongorora mhedzisiro yakawanikwa takaona kuti iyo App yaida chimiro chakatsiga kuti ibudise ruzivo rwekutsvagisa nekukurumidza.
Tinoda kugovana newe iyi yekutanga vhezheni yeApp nyowani uko kwaunowana kuvandudzwa mukugadzirwa uye usability. Iwe unozogona kutsvaga uye kuongorora yako yebasa zvinopihwa uye neinotevera meseji isu tinowedzera huwandu hweanoshanda.
Iko kuvandudzwa kweapp kunozoramba kuchitevera mhinduro yako kuti uwedzere maficha anogona kukubatsira iwe mukutsvaga kwako basa. Muchokwadi, muchikamu che "Zvirongwa" zveApp iwe unogona kupa maonero ako uye / kana kushuma izvo zvaunofunga zvakakodzera. Tiri kuvaka iyo yakakwana app! Tiri kuvimba newe kuti utibatsire kuzviita.
Ichokwadi ndechekuti iko kunyorera kwakavandudza zvakanyanya neaya nhau, ine rutsigiro rwepasirese chero chero chishandiso cheIOS kubva kuIOS 8.0, ndiko kuti, kuenderana kwakawanda, uye inorema chete 25.3 MB. Zvichakadaro, tinokuzivisa iwe kuti kunyorera kunowanikwa chete kumusika wevashandi veSpanish neItaly, zvakangoitika vaviri vevakanyanya kubatwa muEurope.
InfoJobs - Kubasa uye Basavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Infojobs inovandudzwa uye inogamuchira yakakosha kugadzirisa
Google Mepu inovandudzwa neyemushandisi mushandisi uye inoratidza nzvimbo dzekufarira